အရေးပျေါတားဆေးဆိုတာ ဘာလဲ?ဘယျအခြိနျမှာသုံးမလဲ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
နံမညျကိုက ‘ အရေးပျေါတားဆေး ‘ မို့ …. အရေးပျေါလိုအပျတဲ့ အခွအေနမှေပဲ သုံးသငျ့ပါတယျ။အမွဲသုံးဖို့ မသငျ့တျောပါဘူးနျော။
(***အမွဲသုံးဖို့ မသငျ့တျောရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ သူ့ရဲ့ သန်ဓတေားနိုငျစှမျးက ၈၅% လောကျပဲရှိတာကွောငျ့….သငျစနဈတကအြသုံးပွုမယျဆိုရငျတောငျမှ သုံးဖနျမြားလာတဲ့အခါ …တဈခြိနျခြိနျမှာ မမြှျောလငျ့ဘဲ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျတာကွောငျ့ပါ။)
အရေးပျေါတားဆေးအလုပျလုပျပုံကတော့ အမြိုးသမီးသားဥကွှခွေငျးကို တားဆီးပေး(သို့)နှောငျ့နှေးစခွေငျးဖွငျ့ ကိုယျဝနျရခွငျးမှ ကာကှယျတားဆီးပေးပါတယျ။ကှနျဒုံးလိုတော့ လိငျမှကူးစကျတတျတဲ့ရောဂါတှကေို မကာကှယျပေးနိုငျပါဘူး။
ဒါဖွငျ့….အရေးပျေါတားဆေးဆိုတာကို ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးတှမှော သောကျသုံးသငျ့ပါသလဲ?
၁)မမြှျောလငျ့ဘဲ အကာအကှယျမဲ့ လိငျဆကျဆံမိခွငျး
၂)လိငျဆကျဆံနစေဉျ ကှနျဒုံး ပေါကျပွဲသှားခွငျး
စတဲ့အခွအေနတှေမှော အရေးပျေါတားဆေးကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
လိငျဆကျဆံပွီး နာရီ ၁၂၀ အတှငျးသောကျနိုငျသျောလညျး……စောစောသောကျနိုငျလေ အာနိသငျရှိလဖွေဈပွီး …. ဆေးသောကျနောကျကလြေ ဆေးအာနိသငျလြော့ပါးသှားလေ ဖွဈပါသညျ။
နံမည်ကိုက ‘ အရေးပေါ်တားဆေး ‘ မို့ …. အရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမှပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။အမြဲသုံးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူးနော်။
(***အမြဲသုံးဖို့ မသင့်တော်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သူ့ရဲ့ သန္ဓေတားနိုင်စွမ်းက ၈၅% လောက်ပဲရှိတာကြောင့်….သင်စနစ်တကျအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တောင်မှ သုံးဖန်များလာတဲ့အခါ …တစ်ချိန်ချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်တာကြောင့်ပါ။)
အရေးပေါ်တားဆေးအလုပ်လုပ်ပုံကတော့ အမျိုးသမီးသားဥကြွေခြင်းကို တားဆီးပေး(သို့)နှောင့်နှေးစေခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ်။ကွန်ဒုံးလိုတော့ လိင်မှကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
ဒါဖြင့်….အရေးပေါ်တားဆေးဆိုတာကို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ သောက်သုံးသင့်ပါသလဲ?
၁)မမျှော်လင့်ဘဲ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမိခြင်း
၂)လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် ကွန်ဒုံး ပေါက်ပြဲသွားခြင်း
စတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်တားဆေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံပြီး နာရီ ၁၂၀ အတွင်းသောက်နိုင်သော်လည်း……စောစောသောက်နိုင်လေ အာနိသင်ရှိလေဖြစ်ပြီး …. ဆေးသောက်နောက်ကျလေ ဆေးအာနိသင်လျော့ပါးသွားလေ ဖြစ်ပါသည်။